विश्व Archives - Page2of 54 - Recent Nepal News
विश्व अर्थतन्त्र एउटै चार्टमा
विश्व अर्थतन्त्रबारे एउटा चार्ट howmuch.net ले सार्वजनिक गरेको छ । सो चार्टले हरेक देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जसमा मूद्रा स्फीति समावेश गरिएको छैन) लाई आधार मानिएको छ । देशको क्षेत्रफल अनुसारको अर्थतन्त्र रहेको मानिएको छ । हरेक क्षेत्रलाई तीन वटा विधामा विभाजन गरिएको छ – सेवामूलक, औद्योगिक र कृषि । यी तीन उद्योग मध्ये हरेक देशको अर्थतन्त्रमा कुनको योगदान बढी छ भनेर चित्रण गर्न खोजिएको छ । परि...
जापानिज ज्येष्ठ नागरिक चियो मियाकोको निधन
एजेन्सी- जापानिज ज्येष्ठ नागरिक चियो मियाकोको निधन भएको छ । मियाकोको गत आइतबार १सय १७ बर्षको उमेरमा निधन भएको जापानको स्वास्थ्य, श्रम र समाज कल्याण मन्त्रालयले जनकारी दिएको छ । सन् १९०१ को मे २ तारिखमा जन्मिएकी मियाको गत अप्रिलदेखि जापानको सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिक बनेकी थिइन । गत अप्रिलमा ११७ वर्षकै उमेरमा नावि ताजिमाको निधन भएको थियो । आइतबार निधन भएकी मियाको संभवतः संसारकै सबैभन्दा ज्येष्ठ ...
पाकिस्तानको मतदान केन्द्रमा आत्मघाती बम विस्फोट,२८ को मृत्यू
एजेन्सी- मतदान चलिरहेको समयमा पाकिस्तानको एक मतदान केन्द्रमा आत्मघाती बम विस्फोट भएको छ । पाकिस्तानको दक्षिणपश्चिम सहर क्वेटामा भएको विस्फोटमा परी कम्तीमा २८ व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै अन्य ३५ जना घाइते भएका छन् । पाकिस्तानमा अहिले राष्ट्रिय र प्रान्तीय एसेम्बलीका लागि करिब १० करोड ६० लाख मतदाताले मतदान गर्दैछन् । मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न लागेका आत्मघाती आक्रमणकारीलाई प्रहरीले रोकेका थि...
अमेरिकी सांसद र मार्क जुकरबर्ग बीचको फेसबुकबारे संबाद
काठमाडौँ, वैशाख २– आठ करोड ७० लाख प्रयोगकर्ताका डाटा चोरिएको विषयलाई लिएर अमेरिकी कंग्रेसले फेसबुकका संस्थापक तथा प्रमुख मार्क जुकरबर्गलाई गत सोमबार र मंगलबार गरी दुई दिन प्रश्न सोध्यो । उनलाई १० घन्टासम्म सिनेट र कंग्रेसमा राखेर प्रश्न सोधिएको थियो । जुकरबर्गलाई सिनेटरहरूले ६ सयभन्दा बढी प्रश्न सोधेका थिए । ती फेसबुक प्रयोगकर्ताका प्रोफाइल विवरण लिएर तेस्रो पक्षले क्याम्ब्रिज एनाल...
चन्द्रमाको सतहमा के एलियन भेटिएकै हो त ? (भिडियोसहित)
एजेन्सी – कन्स्पिरेसी थिअरिष्ट (जो अपत्यारिला र असाधारण कुरामा विश्वास गरेर कुनै पनि घटनालाई नयाँ ढंगबाट शंका गर्छन्)हरुले चन्द्रमाको सतहमा चलिरहेको त्रिकोणात्मक आकारको वस्तुलाई आधार मान्दै एलियनहरुको आधारभूमि नै चन्द्रमा भएको आफूहरुले पहिलेदेखि गर्दै आएको दाबीमा नयाँ भिडियो फुटेजले बल दिएको बताएका छन् । उच्च शक्तिशाली टेलिस्कोपको सहायताले खिचिएको नयाँ फुटेजमा त्रिकोणात्मक आकारको कालो वस्तु चट्...
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी इतिहासकै खराब राष्ट्रपति ! ओबामा कति स्थानमा ?
एजेन्सी – डोनाल्ड ट्रम्प अहिलेसम्मकै खराब अमेरिकी राष्ट्रपतिमा छानिएका छन् । दुई सय राजनीतिक विशेषज्ञ तथा अमेरिकी जनताबीच भएको सर्वेक्षणमा दुई सय २९ वर्ष पुरानो लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिकामा ट्रम्प सबैभन्दा खराब राष्ट्रपतिका रूपमा छानेका छन् । राष्ट्रपतिले गरेका काम, उपलब्धि, विवाद, व्यक्तिगत चरित्र तथा कार्यकालको मूल्यांकनका आधारमा उनीहरूलाई नम्बर दिइएको थियो । ग्रेट प्रेसिडेन्ट सर्भेमा ट्रम्प ४४...
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका लागि गएको हेलिकप्टर दुर्घटना,चौध जनाको मृत्यु
मेक्सिको- मेक्सिकोमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका लागि गएको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा चौध जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा केही घाइते भएका छन् । हेलिकप्टरमै रहेका मेक्सिकोका गृहमन्त्री र दक्षिणी क्षेत्र ओसाकाका गभर्नरलाई भन्ने सामान्य चोटपटक मात्रै लागेको छ । पाइलटले नियन्त्रण गुमाउँदा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको बताइएको छ । मेक्सिकोमा शनिवार सात दशमलव दुई म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गए...
७१ यात्रुसहित उडेको विमान विमानस्थलबाट छुटेको केही समयमै दुर्घटनाग्रस्त
रसिया - मस्कोबाट रसियाको पश्चिमी क्षेत्रका लागि छुटेको १४८ यात्रुभार क्षमताको एक विमान आइतबार विमानस्थलबाट छुटेको केही समयमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । विमानमा रहेका छ जना चालक दलका सदस्यसहित सवै ७१ जना यात्रु जीवित रहेनसक्ने आशा गौण रहेको रसियाली अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै इन्टरफ्याक्स न्यूज एजेन्सीले आइतबार जनाएको छ । विमान रसियाको राजधानी मस्कोस्थित डोमोडेडोभो विमानस्थलबाट रसियाकै पश्चिमी ओरेन्वर्ग...
एजेन्सी – क्युवाका पूर्वराष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोका छोराले आत्महत्या गरेका छन् । केही महिनादेखि डिप्रेसनको शिकार बन्दै आएका क्यास्ट्रोका जेठा छोरा फिडेल एन्जल क्यास्ट्रोले बिहीबार बिहान आत्महत्या गरेको क्युवाको सरकारी पत्रिका ग्रान्माले पुष्टि गरेको छ । फिडेलीटोको नामबाट चर्चित थिए । तत्कालीन सोभियत संघमा विज्ञान विषय लिएर पढेका फिडेलीटो आणबिक भौतिक शास्त्री हुन् । उनले क्युबा सरकारको सल्लाहकार...
अमेरिकी डीभी भिसा बन्द गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको घोषण
एजेन्सी – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डाइभरसिटी भिसा डिभी बन्द गर्ने घोषण गरेका छन् । अमेरिकी कंग्रेसको संयुक्त सदनलाई संवोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले बिश्वका बिभिन्न देशका नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको डिभी चिठ्ठा बन्द गर्दै आप्रबासीप्रति कडा नीति लिने घोषणा गरेका हुन् । ट्रम्पले आप्रवासी र डीभी लोटरी भिसाबारे पनि उक्त कार्यक्रमको भाषणमा केही प्रमुख निर्णयहरु सुनाएका छन् । आप्र...